Phakathi zokuxhumana, noma ubani angaba kanyekanye futhi abe Lidlulisela kolwazi, futhi njengoba yilowo oyamukelayo, futhi njengoba lowo sihamba ngezindlela ezithile zokuxhumana. Umzila wokuxhumana kuyinto ngempela iyashesha ukuthinteka, futhi umuntu - kuba yibona abasengozini enkulu ingxenye. Ukuphazamiseka kokulinganisela Imininingwane kungenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene.
izithiyo zokuxhumana Ukuxhumana
Le ndoda unemizwa yakhe siqu, kanye nakho ekuphileni kwabo ngabanye. Etholwe noma ulwazi ngocansi zingabangela kuye imizwa ethile. Kungenzeka ukuthi sikhiye noma ukuhlanekezela.
izithiyo Ukuxhumana ekuxhumaneni - kuba khona noma ukungabi khona okuyinto incike nokwanela ulwazi ngocansi. Ukuxhumana isithiyo iyisici luyingxenye ngokwengqondo. It kuvela ukuxhumana zedivayisi futhi umemukeli. izithiyo Ukuxhumana ekuxhumaneni lingaphathelaniswa ne ubutha interlocutor, ukwesaba kwalo, nokunye.
Kwesithiyo ekutholeni ulwazi ingaphinda ephukile, ukwakhiwa okungacacile, ukuchayeka yayo mechanical okungafanele, kanjalonjalo. Kulokhu, kukhona okuthiwa Imininingwane-untula izithiyo.
Ezimweni ezithile, othola ulwazi ngokucacile olizwa izwi, kepha ibanika zonke (noma ingxenye) ukubaluleka okungalungile. Qaphela ukuthi Transmitter akuyona njalo ngesikhathi kubonisa ukuthi ukukhulumisana Kwenziwa njengoba kwakuhleliwe. Kulokhu, a esikhundleni-kokuguqula isithiyo. I ukuhlanekezela kungenzeka azinakwa. Iningi okushiwo ulwazi yokuqala siphazamisekile lapho iketango lide (ukuphinda eziningi).
Kukhona futhi ngokomzwelo zokuxhumana izithiyo. Kuphakama lapho abantu ukukhokha kakhudlwana nemizwa yabo, kunalokho amaqiniso empeleni ekhona. Amagama nezinhlamvu baphathe icala elithile ngokomzwelo, okuyinto usenza isimo ezithile zibangele noma iyiphi inhlangano.
izithiyo Ukuxhumana baningi. Phakathi kwabo lezo ukuthi zisekelwe umehluko usikompilo nenhlalo phakathi kwabantu. Angase aqondwe ngokungeyikho ngenxa ngokususa noma yikuphi ukungaqondani ngokwengqondo.
Ngezinye izikhathi imbangela kokuthola iphutha uma udlulisa ulwazi ngokwalo - lokhu kubizwa ngokuthi ukungaqondi ifonotiki. Ngokuvamile, kwenzeka lapho abahlanganyeli yokuxhumana abakhuluma ulimi oluhluke, ngaphandle kokwazi nomunye. Isizathu kungase ecasha isici Lidlulisela inkulumo, buviyoviyo okungalungile, inkulumo lishesha kakhulu, eziningi kakhulu amazwi-izimuncagazi.
Semantic zokuxhumana izithiyo zingahlanganiswa umehluko othile e-value izinhlelo. Sikhuluma inkinga isitsotsi, nejagoni. Kuyiqiniso ukuthi isiko ngalinye yakhiwa sebuningini microcultures. Abamele ngamunye wabo angaba ukunikeza inani ezinye amagama aqondwa kuphela kumbuthano uhlobo oluthile lwabantu.
kuphakama elinengqondo zokuxhumana izithiyo uma idivayisi sisebenzisa ukuhlakanipha ukucabanga ukuthi umamukeli angeke noma abakwazi ukuthola. Multiple izinhlelo okunengqondo akusho ziyaphikisana isizathu, kodwa ungakhohlwa ukuthi ukudluliselwa ulwazi oluthile kuyadingeka ukuze uhlaziye umamukeli. Uma kungenjalo, ungase uhlangane ukungaqondi ngokuphelele. Ixhumana umqondo yamuva womuntu, kungcono ukubeka konke emashalofini.
Socio kwamasiko okuxhumana izithiyo kungadalwa ezihlukahlukene ukubukwa kwezombangazwe, endleleni yokuphila noma ukuphila interlocutors. Kulokhu, into ebalulekile ngubani ukubaluleka exhunywe izici zokuphila kwethu.
Sicily ngo-Okthoba: Izibuyekezo
Intel HD Graphics 2500 - ukusebenza edidiyelwe ihluzo subsystem
TOP 6: guys nezinwele ezimhlophe